Soo dejisan Opera 59.1.2926.54067 – Android – Vessoft
Qeybta: Dareemaha Webka
Bogga rasmiga ah: Opera
Opera – browser oo degdeg ah oo si sahlan loo isticmaali joogis raaxo ee internet-ka. Software ayaa si toos ah habaysaa size la doonayo iyo qaab qoraalka ah ee bogga internetka ka yar shaashadda qalab. Opera ka mid ah la dhisay-in cunto news kaas oo awood si ay ula socdaan horumarka ugu dambeeyay ee caalamka iyo dhakhso ah isugu bedeli kartid bogagga hore iyada oo guddi u express. Software waxa uu isticmaalaa hab riixo u dajinta dhakhso ah bogga internetka ee ah in network xirmi ah. Opera ka kooban yahay qaybo kaas oo awood si loo yareeyo xaddiga isticmaalka gaadiidka ah.
Fast in websites helaan
Habeynayo bogagga web hoos size shaashadda
Badbaadiya oo gaadiidka
Soo dejisan Opera
Faallo ku saabsan Opera
Opera Xirfadaha la xiriira
Chrome – biraawsar deg deg ah oo aamin ah iyadoo la kaashanayo tikniyoolajiyadda casriga ah. Software-ka ayaa leh qaab qarsoodi ah si looga hortago badbaadinta taariikhda websaydhyada la daawaday.
Firefox – mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha daalacashada adduunka ugu fiican iyadoo la kaashanayo tikniyoolajiyadda casriga ah. Softiweerku wuxuu bixiyaa deganaansho raaxo leh internetka oo wuxuu taageeraa isku xirnaanta waxyaabo kala duwan.
Mobdro – waa barnaamij lagu daawado barnaamijyada fiidiyowga ee mowduucyada kala duwan ee laga helo adduunka. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu helo qulqulka fiidiyaha ee luuqadaha uu doorto isticmaale.
Tani waa habka dayax-gacmeedka ah oo lagu taageerayo adeegyadeeda internetka oo soo bandhigaysa khariidad faahfaahsan oo ku habboon wadada ugu wanaagsan waddamada Yurub iyo Aasiya.
CPU-Z – dalab si loo soo bandhigo macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda aaladda. Isticmaalaha wuxuu helaa fursad uu ku daawado xogta xusuusta, processor-ka, heerkulka iyo qaybaha kale ee nidaamka.